GREAT POOL, Isu tinogadzira, tinogadzira uye tinopa zvemhando yepamusoro midziyo uye masisitimu eMVURA TREATMENT yemadziva ekushambira ekutengesa, masangano uye zvivakwa zvemvura zveveruzhinji uye maficha emvura.
Tine makore makumi maviri nemashanu eruzivo mukugadzira michina yekuchenesa mvura. Fekitori yedu kuChina yanga yakatarisana nekuvandudza tekinoroji yepamberi, kuchengetedza simba, kutenderedza nharaunda, uye inodhura-inoshanda mishonga yekuchenesa mvura.
Bhizinesi redu remukati rinosanganisira mvura inotenderera kusefa michina, disinfection midziyo, kudziyisa uye inogara tembiricha michina, spa zvishandiso uye mamwe madhipatimendi. Zvigadzirwa zvinotsigira zvinogadzirwa nemadhipatimendi aya zvinounzwa kune inoenderana purojekiti saiti zvinoenderana nezvinodiwa zvepurojekiti yedu, uye inoiswa uye inovakwa pasi pekutungamirwa kwechikwata chedu chehunyanzvi.
Mvura Yekurapa Sisitimu yeMadziva ekushambira, Spas, Mvura Landscape uye Mvura Park
Swimming pool pombi ndiyo musimboti wekutuhwina mvura yekurapa hurongwa.
Mvura inoputirwa kunze kwedziva, inopfuura nepasefa uye makemikari ekurapa system, uye inoramba ichidzokera kudziva kuti ive nechokwadi chekuti hapana tsvina, marara uye mabhakitiriya mudziva.
GREAT pool swimming pool pombi dzakakodzera madziva ekutuhwina emhando dzose nemhando, kubva kumadziva madiki ega ega ekutuhwina kusvika kumadziva makuru ekutuhwina eOlympic size.
Tsvaga zvimwe nezve GREATPOOL's Circulation Systems yekurapa mvura yedziva
Iyo yakanyatsogadzirwa filtration system ichabatsira kuve nechokwadi chemvura yakachena yedhamu rako rekushambira.
Iyo GREAT POOL yekutuhwina sefa yakagadzirirwa kuchenesa tsvina uye mamwe madiki madiki mumvura, uye inogona zvakare kubatsira kuderedza kukura kwebhakitiriya uye algae.
GREAT pool ndiye mutungamiri wepasi rose mune advanced filtration tekinoroji uye ine yakakura kwazvo siyana yemafirita ekutuhwina; kubva nyore katuriji mafirita kusvika kujecha uye diatomaceous pasi (DE) mafirita.
Tsvaga zvimwe nezve GREATPOOL's Filtration Systems yekurapa mvura yedziva
Mishonga inouraya utachiona inoshandiswa kuuraya chero utachiona hunenge hwasara mumvura; chikamu chinokosha chekugadzirisa mvura nokuti mabhakitiriya akawanda anogona kukuvadza hutano hwevanhu.
Chlorine uye bromine disinfection
Iyo inonyanya kuzivikanwa uye yakajairika mhinduro yekuuraya hutachiona hwemvura yekutuhwina. Chlorine uye bromine inoshanda zvakanyanya mukuuraya tupukanana, asi inoda kunyatsodzorwa. Yese GREAT POOL chlorine kurapwa masisitimu akagadzirwa zviri nyore kushandisa uye chengetedzo yevashandisi vedziva.
Iri nzira iri kuwedzera kufarirwa, kunyanya mumadziva ekutuhwina. Ozone inoshandisa maatomu eokisijeni kuparadza tupukanana kuburikidza neoxidation. Kana ichienzaniswa neyechinyakare chlorine uye bromine-based disinfection masisitimu, ozone ine zvakawanda zvakanaka. Ozone haingogoni kuuraya utachiona mumvura chete, asiwo kubvisa makemikari asara mumvura yedhamu. Izvi zvisaririra zvemakemikari zvinogona kukonzera turbidity mumvura, kugadzira kunhuhwirira kwemakemikari, uye kukanganisa ganda nemeso.
Nekushandisa ultraviolet wavelengths, mabhakitiriya haashande uye haakuvadzi. Mhando iyi yetekinoroji ine zvakawanda zvakanaka zveozone system, asi haidi kutonga kwedosi nekuti hapana makemikari anobatanidzwa.
Tsvaga zvimwe nezve GREATPOOL's Disinfection Systems yekurapa mvura
Ziva zvimwe nezve GREATPOOL's Heating uye Dehumidification Systems yekurapa mvura yedziva
Kupisa uye Dehumidification Systems
Chinangwa chedu ndechekupa yakanakisa kudziyisa uye dehumidification mhinduro yedziva rako rekutuhwina uye mashandisiro aunoita
Semugadziri, GREAT POOL inodada nekukwanisa kukupa mhinduro dzakasiyana-siyana dzesarudzo yako yekuti ungadziisa sei dziva rekutuhwina.
Kushanda musimboti we solar swimming pool kudziyisa ndiko kushandisa simba rezuva remahara kupisa mvura inotenderera nekuidzosera kudziva rekushambira pane tembiricha yakakwira.
Electric swimming pool heaters, anonziwo kupisa pombi, kushanda nokuunza mvura kupinda kudziyisa tangi uye ipapo kupomba mvura inodziya kudzokera swimming pool. Kuchinjana nguva dzose kwekupisa uye kutonhora kunoita kuti dziva rako rekutuhwina rirambe richidziya. Kune marudzi maviri emagetsi emagetsi; tsime remvura nemhepo. Kunyange zvazvo zviviri izvi zvinoshanda zvakafanana, mvura inodziya inopisa inotamisa kupisa kubva mumvura kuenda kumvura yako yekushambira, nepo mhepo inopisa inopisa inoshandisa kupisa kubva mumhepo.
Mapombi ekupisa ari kuramba achizivikanwa nekuda kwekuderera kwawo kwemamiriro ekunze uye nekuwedzera simba rekuita. Heat pump water heaters inogona kushanda munzvimbo dzisina kukodzera kupisa mvura yezuva
Sauna uye SPA system
Zvese zviri zviviri steam uye sauna zvakanakira hutano hwemuviri nepfungwa.
Rega GREATPOOL igadzirise kana kugadzirisa iyo sauna kamuri sisitimu zvinoenderana nepurojekiti yako inogona kunge iri sarudzo yakanyanya kunaka. Ose ari maviri anopa kuchinjika kukuru uye nyore kuisirwa.
Tsvaga zvimwe nezve GREATPOOL's Sauna uye SPA equipemnt
Midziyo yepaki yemvura
Izvi zvimiro zvitsva uye zvakagadzirirwa zvakanakisa zvinopa inonakidza uye yekufungidzira mikana yekutamba kune wese munhu, vangave vana kana vakuru, kuti vabatane nemvura. GREAT POOL dhizaini uye inopa zvinoshamisa mvura paki mhinduro zvinoenderana nezvaunoda.
Tsvaga zvimwe nezve GREATPOOL's Waterpark mhinduro
Midziyo yekutuhwina uye masisitimu anogadzirwa nekupihwa neGREATPOOL zvinotengeswa pasi rose kuburikidza netiweki yevamiririri, vavaki, vanogovera uye nyanzvi makondirakiti. Vanonyatso sarudza uye kunyatsoisa zvigadzirwa zvedu, zvishandiso uye masisitimu. Chinangwa chedu ndechekuita kuti zvigadzirwa zvedu zvishande mumadziva ekushambira, spas uye zvivakwa zvemvura, kungave kutsva kuvaka, kugadzirisa kana kushanda.
Kana iwe uri kushingaira kubatanidzwa mukushambira kuronga, kugadzira, kuvaka kana kushanda, uye uchida kubatsira kushandisa zvigadzirwa zvedu uye matekinoroji kune zvivako munzvimbo yako, tapota taura nesu pakarepo.
Rega tibatsire yako dziva midziyo kumisikidza!
Infinity Edge Swimming Pool, Swimming Pool Service, Kunze Swimming Pool Solution, Public Swimming Pool Solution, Swimming Pool Company, Swimming Pool Project,